A: Manomboka amin'ny fanomanana santionany, fanadiovana hatramin'ny fitenenana, famakafakana ary fikarohana, ny TIANGEN dia manana reagents, zavamaneno ary sehatra automatique ho an'ny mpanjifa avy amin'ny andrim-pianarana sy orinasa indostrialy.
F: Inona ny fahaizanao mamokatra?
A: Manana ny fahaizan'ny famokarana kitapo 1 tapitrisa isam-bolana isika.
A: ENY, manana ny mari-pahaizana rehetra izahay（ISO13485, ISO9001, CE, NMPA）takiana amin'ny fahazoan-dàlana fanondranana entana any ivelany sy any ivelany.
F ： Inona ny tanjaky ny R&D anao.
A: TIANGEN dia manana ekipa R&D matihanina izay misy dokotera sy tompo mazàna. Ny orinasa dia manangona 10% amin'ny totalin'ny varotra amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra vaovao isan-taona. Tsy vokatra vaovao am-polony fotsiny no avoaka isan-taona, fa koa patanty famoronana maro sy patanty modely azo ampiasaina.
F: Inona ny rojo famatsiana anao sy ny fenitry ny QC.
A: ny fitaovan'ny TIANGEN dia mifantina loharano mpamatsy azo antoka sy avo lenta indrindra eto an-tany. Ambonin'izany, fanaraha-maso kalitao 100% no hatao ho an'ny akora rehetra, ary ny fahaizan'ireo mpamatsy dia hojerena sy arahi-maso isan-taona mba hahazoana antoka fa ampy ny famatsiana akora tsara kalitao.
F: Manohana ny OEM / ODM ve ianao?
A: ENY, afaka manao prototype sy manamboatra ny vokatra tsara mifanaraka amin'ny fampiharana anao manokana izahay.
A: Ho an'ny vokatra eo amin'ny talantalana, ny tim-leade dia 7 andro. Ho an'ny vokatra namboarina dia 14-30 andro ny fotoana fitarihana arakaraka ny habetsan'ny famandrihana.
F: Manana MOQ ve ianao?
A: Ho an'ny vokatra eo amin'ny talantalana, tsy manana fetra MOQ izahay, afaka manafatra izay tadiavinao ianao. Ho an'ny vokatra namboarina dia azonao atao ny mametraka ny mizana miaraka amin'ny famaritana, logo, fonosana sns, ka ny MOQ dia hifampiraharaha isaky ny tranga.
A: Kaonty T / T amin'ny kaonty orinasa
F: Inona no toerana misy anao eo amin'ny sehatry ny indostria?
A: TIANGEN dia natsangana nandritra ny 16 taona, ary izy no orinasa mpamatsy ambony eo amin'ny sehatry ny biolojia molekiola ao Shina.
A: Nalefanay tany amin'ny firenena 40 ny asanay, Azia, Amerika, Eropa ary Afrika.
F: Azoko atao ve ny mitsidika ny orinasa misy anao alohan'ny filaminana?
A: Azo antoka, miarahaba anao tamim-pahatsorana izahay hitsidika ny fivarotanay.